ဆေးရုံ လာပွရငျး ကိုယျဝနျ ရငျ့မာနပွေီ ဖွဈတဲ့ ဇနီးသညျလေး အတှကျ ထိုငျခုံလေး ဖွဈပေးခဲ့တဲ့ ခငျ ပှနျး – Update News
ဆေးရုံ လာပွရငျး ကိုယျဝနျ ရငျ့မာနပွေီ ဖွဈတဲ့ ဇနီးသညျလေး အတှကျ ထိုငျခုံလေး ဖွဈပေးခဲ့တဲ့ ခငျ ပှနျး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို လိုအပ်တာထပ်ပိုတဲ့ဂရုစိုက်မှုမျိုးတွေပေးသင့်ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံကစုံတွဲတစ်တွဲဟာ ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ဆေးရုံသို့လာပြရင်း အလှည့်ကျတန်းစီစောင့်နေခဲ့ရတာပါ ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဇနီးသည်မှာ ရပ်စောင့်နေရင်း အတော်လေးပင်ပန်းလာပြီးနောက် သူမရဲ့ခြေထောက်တွေဟာ မလှုပ်ရှားနိုင်တော့လောက်အောင်ထုံထိုင်းလာပါတော့တယ် ။.
ဇနီးသည်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူ့ရဲ့ပုခုံးပေါ်မှာဇနီးဖြစ်သူထိုင်ဖို့ အဆင်ပြေအောင် ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ချပြီး ဇနီးသည်အတွက်ထိုင်ခုံလေးဖြစ်ပေးခဲ့ပါတော့တယ် ။
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်လေးဟာ တရုတ် social media ပေါ်မှာအတော်လေးပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတော့တယ် ။ အဆိုပါစုံတွဲဟာ မည်သူမည်ဝါဖြစ်မှန်း အတိအကျမသိရပေမဲ့ ဆေးရုံရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းကနေ အဖြစ်အပျက်လေးကိုရိုက်ယူထားနိုင်ခဲ့တာပါ ။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ဇနီးအပေါ်အချစ်စစ်နဲ့သိတတ်နားလည်ဖေးမပေးတဲ့ အပြုအမှုကို social media အသုံးပြုသူများက ချီးကျူးခဲ့ကြပြီး ၊ ဆေးရုံရှိ အခြားသောသူများကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အတွက်ထိုင်ခုံကနေမထဘဲ နေရာမပေးခဲ့ကြလို့ ဝေဖန်ခြင်းမျိုးခံခဲ့ရပါတယ် ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမှု မချမ်းသာရင်နေပါ ဇနီးဖြစ်သူလိုအပ်နေချိန်ဖေးမကူညီဖို့အသင့်ရှိတဲ့ခင်ပွန်းမျိုးကိုတော့ မိန်းကလေးတိုင်းကလိုချင်တောင်းတမိကြမှာပါ ။
အခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သော နေ့‌လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။း
ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှကေို လိုအပျတာထပျပိုတဲ့ဂရုစိုကျမှုမြိုးတှပေေးသငျ့ပါတယျ ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး တရုတျနိုငျငံကစုံတှဲတဈတှဲဟာ ဆရာဝနျနဲ့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့ ဆေးရုံသို့လာပွရငျး အလှညျ့ကတြနျးစီစောငျ့နခေဲ့ရတာပါ ။
ကိုယျဝနျဆောငျဇနီးသညျမှာ ရပျစောငျ့နရေငျး အတျောလေးပငျပနျးလာပွီးနောကျ သူမရဲ့ခွထေောကျတှဟော မလှုပျရှားနိုငျတော့လောကျအောငျထုံထိုငျးလာပါတော့တယျ ။.
ဇနီးသညျရဲ့အဖွဈကိုမွငျပွီး ခငျပှနျးဖွဈသူက သူ့ရဲ့ပုခုံးပျေါမှာဇနီးဖွဈသူထိုငျဖို့ အဆငျပွအေောငျ ကွမျးပွငျပျေါထိုငျခပြွီး ဇနီးသညျအတှကျထိုငျခုံလေးဖွဈပေးခဲ့ပါတော့တယျ ။
အဆိုပါအဖွဈအပကျြလေးဟာ တရုတျ social media ပျေါမှာအတျောလေးပြံ့နှံ့သှားခဲ့ပါတော့တယျ ။ အဆိုပါစုံတှဲဟာ မညျသူမညျဝါဖွဈမှနျး အတိအကမြသိရပမေဲ့ ဆေးရုံရဲ့ CCTV မှတျတမျးကနေ အဖွဈအပကျြလေးကိုရိုကျယူထားနိုငျခဲ့တာပါ ။
ခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့ ဇနီးအပျေါအခဈြစဈနဲ့သိတတျနားလညျဖေးမပေးတဲ့ အပွုအမှုကို social media အသုံးပွုသူမြားက ခြီးကြူးခဲ့ကွပွီး ၊ ဆေးရုံရှိ အခွားသောသူမြားကတော့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျအတှကျထိုငျခုံကနမေထဘဲ နရောမပေးခဲ့ကွလို့ ဝဖေနျခွငျးမြိုးခံခဲ့ရပါတယျ ။
အခုလိုအခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျးသာယာပြျောရှငျသော နေ့‌လေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။း